डा बच्चुराम केसीको सम्झनामा दरवार हत्याकाण्डको त्यो रात, जसले तीन घाइतेको अप्रेशन गरे
जेठ १९, २०७५ शनिवार ११:४१:०८ प्रकाशित
नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसका कार्यकारी निर्देशक डा. बच्चुराम केसीले नेपाली सेनामा रहेर सेवा गरेको ३४ वर्ष नाघिसक्यो । हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसीले सेनाद्वारा सञ्चालित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा लामो समय बिताए । त्यहाँबाट २०७० सालमा उनी रिटायर्ड भएका हुन् । उनी अस्पतालको कमान्डेन्ट (प्रमुख) सम्म भए । सेनाको ओहदामा उपरथी । उनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को स्थापनाकालदेखिकै एसोसिएट प्रोफेसर पनि हुन्। उनको सम्झनामा, त्यो जेठ १९ गतेका रात ।
२०५८ साल जेठ १९ गते । दरबार हत्याकाण्डको ऐतिहासिक कुरुप घटना । यो घटनाले डा. केसीको जीवनमा पनि गहिरो छाप छोडेको छ । हत्याकाण्डमा घाइते भएकाहरुको उपचारमा उनी संलग्न थिए । तीमध्ये गोली लागेर घाइते भएका तीन जनालाई उनले तत्काल शल्यक्रिया गरी सामान्य जीवनमा फर्काएका थिए।
शुक्रबार सैनिक अस्पतालमा उनले शल्यक्रिया गर्ने दिन पथ्र्यो । बिहान ९ बजेदेखि साढे ३ बजेसम्म उनी शल्यक्रियामा खटिन्थे । त्यहाँ काम सकेपछि उनी बेलुकाको समयमा अर्को अस्पतालमा सेवा दिन्थे । दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन उनी घर पुग्दा केही अबेर भएको थियो । उनी सम्झिन्छन्, ‘घर पुगेको केही समयमै हस्पिटल प्रमुखको फोन आयो । फोनमा भन्नुभयो, तुरुन्तै अस्पताल पुग्नु।’
इमर्जेन्सी केस आयो भन्ने त उनलाई थाहा भइहाल्यो । सोधखोज गरे, ‘के पर्‍यो हजुर । अस्पतालको गाडी लिन आउँदैछ कि ?’ उताबाट आत्तिएको जस्तै गरी आवाज आयो, ‘तिमी गुडेर, उडेर वा दौडेर जे गरी आए पनि तुरुन्तै अस्पताल पुग्नुपर्‍यो ।’
उनलाई लाग्यो, घटना ठूलै रहेछ । उनी गाडीको इमर्जेन्सी लाइट बालेर तीव्र गतिमा बानेश्वरबाट सैनिक अस्पताल पुगे । अस्पताल पुगेर घटना विवरण सुन्दा उनलाई सपनाझैँ लाग्यो । अस्पताल पुर्‍याइएका मध्ये धेरैको ज्यान गइसकेको थियो । केही घाइते थिए, तीमध्ये तीनजनाको शल्यक्रिया गरे । उनले राति साढे ३ बजेसम्म अप्रेसन गरेका थिए । उनले भने, ‘मैले अप्रेसन गरेका तीनैजना पूर्ण रुपमा निको हुनुभयो । सबैलाई गोली लागेको थियो । अहिले पुरानै अवस्थामा जीवन बिताइरहनु भएको छ ।’